အိမ်မြှောင်အသားစားသုံးခြင်းဖြင့် ရရှိလာမယ့် အံ့မခန်းအကျိုးကျေးဇူး (၁၀) မျိုး - Real Gaming Myanmar
အိမ်မြှောင်အသားစားသုံးခြင်းဖြင့် ရရှိလာမယ့် အံ့မခန်းအကျိုးကျေးဇူး (၁၀) မျိုး
By thant naing /4months ago / Health / No Comments
အိမ်မြှောင်သားစားခြင်းက ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်တယ်ဆိုလို့ အရမ်းမအံ့သြသွားပါနဲ့။ အကြောင်းကတော့ ကျန်းမာရေးအရ အိမ်မြှောင်သားကို စားသုံးကြတဲ့ နိုင်ငံတွေနဲ့ လူတွေအမြောက်အများရှိနေလို့ပါပဲ။ အိမ်မြှောင်တင်မကပါဘူး အိမ်မြှောင်နဲ့ မျိုးနွယ်တူတွေဖြစ်တဲ့ ဖွတ်၊ ပုတက်လိုမျိုး အကောင်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ အိမ်မြှောင်အပြင် တခြားသော Lizards မျိုးနွယ်တွေကို စားသုံးပေးခြင်းဖြင့် ရရှိလာမယ့် အံ့မခန်းအကျိုးကျေးဇူးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ချက်ပြုတ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ အမြီးရယ်၊ ခေါင်းရယ်၊ စအိုရယ်ကို ဖြတ်ပြီး ရေနွေးထဲမှာ (၂) နာရီလောက်အရင်ပြုတ်ရပါမယ်။ နောက်ပြီးမှ ကြိုက်နှစ်သက်သလို ချက်စားနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ အိမ်မြှောင်ခုတ်ထစ်ရာမှာ အသုံးပြုတဲ့စဉ့်တုံးကိုလည်း သီးသန့်ထားပေးရမှာဖြစ်ပြီး တခြားအရာတွေကို အဲ့ဒီ့အပေါ်မှာ လှီးဖြတ်ခြင်းမပြုရပါဘူး။ အစာအဆိပ်ဖြစ်စေနိုင်လို့ပါပဲ …… ။
အိမ်မြှောင်အသားထဲမှာ ကယ်လိုရီတွေကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့အတွက် ခွန်အားတိုးစေရုံသာမက သက်လုံလည်းကောင်းပြီး အမောခံနိုင်စေပါတယ် …. ။
အိမ်မြှောင်အသားထဲမှာပါဝင်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေဟာ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့ ဆိုင်တဲ့ရောဂါတွေကိုသက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်တာကြောင့် ပန်းနာရင်ကျပ်အပြင် တခြားအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ် ….. ။
အာရှရဲ့တစ်ချို့နိုင်ငံတွေမှာ အိမ်မြှောင်သားတွေကို ဝက်ရူးပြန်ရောဂါကုသဖို့အတွက် အသုံးပြုကြပါတယ်။ အိမ်မြှောင်သားဟာ ဦးနှောက်နဲ့အာရုံကြောအတွက် အထူးကောင်းမွန်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ် ….. ။
အိမ်မြှောင်အသားဟာ အရေပြားရောဂါတွေဖြစ်တဲ့ ယားနာ၊ နှင်းခူနဲ့ psoriasis လို့ခေါ်တဲ့အရေပြားရောဂါတွေကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အိမ်မြှောင်အသားကိုအခြောက်ခံပြီး အမှုန့်ဖြစ်အောင်လုပ်ကာ ယားနာတွေပေါ်ကို လိမ်းပေးနိုင်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ် ….. ။
အိမ်မြှောင်အသားဟာ သွေးသန့်စေပြီး ဝမ်းကိုလည်း သန့်စင်ပေးနိုင်ပါတယ် ….. ။
အိမ်မြှောင်အသားဟာ အရေပြားရောဂါတွေကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတဲ့အတွက် ဝက်ခြံတွေကိုလည်း ပျောက်ကင်းသက်သာစေပါတယ်။ တစ်ချို့သူတွေကတော့ အိမ်မြှောင်ရဲ့သွေးကို ဝက်ခြံကုသရာမှာ အသုံးပြုကြပါတယ် ….. ။
အင်ဒိုနီးရှားက ကင်ဆာရောဂါသည်တစ်ဦးကို ဆရာဝန်တွေက အိမ်မြှောင်အသားစားဖို့ အကြံပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နေ့စဉ်အိမ်မြှောင် ၃ ကောင်ပုံမှန်စားသုံးပေးပြီး ၆လအကြာမှာတော့ ကင်ဆာရောဂါအလျင်းပျောက်သွားတာကို တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ် ….. ။
အိမ်မြှောင်အသားဟာ လိပ်ခေါင်းရောဂါတွေကို သက်သာပျောက်ကင်းစေတဲ့အပြင် အစာကြေစေပြီး ဝမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါတွေကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ် …. ။
အိမ်မြှောင်အသားစားခြင်းဖြင့် အကြောဆိုင်းတာ၊ လေငန်းတာ၊ လေဖြတ်တာတွေကိုလည်း တားဆီးကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ် … ။
သတင်းတစ်ခုရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ အသက်(၁၂၃)နှစ်အရွယ် ကမ္ဘာ့အသက်ရှည်ဆုံးအဖိုးအိုကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါ အဖိုးအိုဟာ နေ့တိုင်း အိမ်မြှောင်အသားကို စားသုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဖိုးအိုဟာ အသက်ရှည်တဲ့အပြင်ကို ကျန်းမာဖျတ်လပ်နေတုန်းပဲလို့ သိရပါတယ် ….. ။
အိမျမွှောငျသားစားခွငျးက ကနျြးမာရေးအတှကျ ကောငျးမှနျတယျဆိုလို့ အရမျးမအံ့သွသှားပါနဲ့။ အကွောငျးကတော့ ကနျြးမာရေးအရ အိမျမွှောငျသားကို စားသုံးကွတဲ့ နိုငျငံတှနေဲ့ လူတှအေမွောကျအမြားရှိနလေို့ပါပဲ။ အိမျမွှောငျတငျမကပါဘူး အိမျမွှောငျနဲ့ မြိုးနှယျတူတှဖွေဈတဲ့ ဖှတျ၊ ပုတကျလိုမြိုး အကောငျတှလေညျးပါဝငျပါတယျ။ ခုဖျောပွပေးမှာကတော့ အိမျမွှောငျအပွငျ တခွားသော Lizards မြိုးနှယျတှကေို စားသုံးပေးခွငျးဖွငျ့ ရရှိလာမယျ့ အံ့မခနျးအကြိုးကြေးဇူးတှပေဲဖွဈပါတယျ။ ခကျြပွုတျတော့မယျဆိုရငျတော့ အမွီးရယျ၊ ခေါငျးရယျ၊ စအိုရယျကို ဖွတျပွီး ရနှေေးထဲမှာ (၂) နာရီလောကျအရငျပွုတျရပါမယျ။ နောကျပွီးမှ ကွိုကျနှဈသကျသလို ခကျြစားနိုငျတယျလို့ဆိုထားပါတယျ။ အိမျမွှောငျခုတျထဈရာမှာ အသုံးပွုတဲ့စဉျ့တုံးကိုလညျး သီးသနျ့ထားပေးရမှာဖွဈပွီး တခွားအရာတှကေို အဲ့ဒီ့အပျေါမှာ လှီးဖွတျခွငျးမပွုရပါဘူး။ အစာအဆိပျဖွဈစနေိုငျလို့ပါပဲ …… ။
အိမျမွှောငျအသားထဲမှာ ကယျလိုရီတှကွှေယျဝစှာပါဝငျတဲ့အတှကျ ခှနျအားတိုးစရေုံသာမက သကျလုံလညျးကောငျးပွီး အမောခံနိုငျစပေါတယျ …. ။
အိမျမွှောငျအသားထဲမှာပါဝငျတဲ့ အာဟာရဓာတျတှဟော အသကျရှူလမျးကွောငျးနဲ့ ဆိုငျတဲ့ရောဂါတှကေိုသကျသာပြောကျကငျးစနေိုငျတာကွောငျ့ ပနျးနာရငျကပျြအပွငျ တခွားအသကျရှူလမျးကွောငျးဆိုငျရာ ရောဂါတှကေို ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ ….. ။
အာရှရဲ့တဈခြို့နိုငျငံတှမှော အိမျမွှောငျသားတှကေို ဝကျရူးပွနျရောဂါကုသဖို့အတှကျ အသုံးပွုကွပါတယျ။ အိမျမွှောငျသားဟာ ဦးနှောကျနဲ့အာရုံကွောအတှကျ အထူးကောငျးမှနျတယျလို့လညျး သိရပါတယျ ….. ။
အိမျမွှောငျအသားဟာ အရပွေားရောဂါတှဖွေဈတဲ့ ယားနာ၊ နှငျးခူနဲ့ psoriasis လို့ချေါတဲ့အရပွေားရောဂါတှကေို ပြောကျကငျးစနေိုငျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ အိမျမွှောငျအသားကိုအခွောကျခံပွီး အမှုနျ့ဖွဈအောငျလုပျကာ ယားနာတှပေျေါကို လိမျးပေးနိုငျတယျလို့လညျး သိရပါတယျ ….. ။
အိမျမွှောငျအသားဟာ သှေးသနျ့စပွေီး ဝမျးကိုလညျး သနျ့စငျပေးနိုငျပါတယျ ….. ။
အိမျမွှောငျအသားဟာ အရပွေားရောဂါတှကေို ပြောကျကငျးစနေိုငျတဲ့အစှမျးရှိတဲ့အတှကျ ဝကျခွံတှကေိုလညျး ပြောကျကငျးသကျသာစပေါတယျ။ တဈခြို့သူတှကေတော့ အိမျမွှောငျရဲ့သှေးကို ဝကျခွံကုသရာမှာ အသုံးပွုကွပါတယျ ….. ။
အငျဒိုနီးရှားက ကငျဆာရောဂါသညျတဈဦးကို ဆရာဝနျတှကေ အိမျမွှောငျအသားစားဖို့ အကွံပေးခဲ့ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ နစေ့ဉျအိမျမွှောငျ ၃ ကောငျပုံမှနျစားသုံးပေးပွီး ၆လအကွာမှာတော့ ကငျဆာရောဂါအလငျြးပြောကျသှားတာကို တှရှေိ့ခဲ့ကွပါတယျ ….. ။
အိမျမွှောငျအသားဟာ လိပျခေါငျးရောဂါတှကေို သကျသာပြောကျကငျးစတေဲ့အပွငျ အစာကွစေပွေီး ဝမျးနဲ့ပတျသကျတဲ့ရောဂါတှကေို ပြောကျကငျးစနေိုငျပါတယျ …. ။
အိမျမွှောငျအသားစားခွငျးဖွငျ့ အကွောဆိုငျးတာ၊ လငေနျးတာ၊ လဖွေတျတာတှကေိုလညျး တားဆီးကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ … ။
သတငျးတဈခုရဲ့ ဖျောပွခကျြအရ အသကျ(၁၂၃)နှဈအရှယျ ကမ်ဘာ့အသကျရှညျဆုံးအဖိုးအိုကို တှဆေုံ့မေးမွနျးခဲ့တဲ့အခါ အဖိုးအိုဟာ နတေို့ငျး အိမျမွှောငျအသားကို စားသုံးခဲ့တယျလို့ဆိုပါတယျ။ အဖိုးအိုဟာ အသကျရှညျတဲ့အပွငျကို ကနျြးမာဖတျြလပျနတေုနျးပဲလို့ သိရပါတယျ ….. ။
Previous: သင်္ကြန်မှာအပြင်ထွက်မကဲဘဲ အိမ်ထဲမှာနေပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်း(၈)ခု
Next: ဘယ်လိုလူမျိုးနဲ့ ဖူးစာဆုံမှာလဲ (လအလိုက်)